दुधको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो, प्रतिलिटर कति ? - krishipost.com
पछिल्लो समय सबै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । अब दूधको मूल्य पनि प्रतिलितर एकैपटक १० रुपैयाँ वृद्धि हुने भएको हो ।
हाल प्रतिलितर दूधको मूल्य ७६ रुपैयाँ रहेकोमा अब १० रुपैयाँ मूल्य बढेर ८६ रुपैयाँ पुग्नेछ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दूधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका प्रवक्ता डा. बालक चौधरीले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य वृद्धिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको बताए । यसभन्दा पहिले २०७३ सालमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ दूधको मूल्य वृद्धि भएको उनले बताए ।
बोर्डले सिफारिस गरेको मूल्यमा मन्त्रालयले छलफलग गरेर नयाँ दूधको मूल्य कायम हुने चौधरीले जानकारी दिए । १० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि हुँदा ७ रुपैयाँ प्रति लिटर कृषकलाई र ३ रुपैयाँ उद्योगीलाई जानेछ ।